६ बर्षको उमेरमा नै सिक्स प्याक बनाए यी बालकले – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैली६ बर्षको उमेरमा नै सिक्स प्याक बनाए यी बालकले
January 19, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 8355
काठमाडौं – मानिसहरुले आफ्नो शरिर फिट राखिराख्न विभिन्न उपायहरु अपनाइरहेका हुन्छन् । शरिरलाई स्वस्थ र बलियो राख्न बिहान बेलुका शारीरिक ब्यायाम पनि गर्ने गर्छन् ।
हामिले धेरैजसो युवा अवस्थाका मानिसले मात्र शारीरिक ब्यायाम गरेको देखेका हुन्छौ । युवा नै बिहान बेलुका जीम जाने तथा शारीरिक ब्यायाम गर्ने गर्छन् । तर एक साना बालक छन् जसले दिनहु शारीरिक ब्यायाम गर्छन् । उक्त बालकले आफ्नो शरिरलाई फिट राख्न अनेक उपाय अपनाउछन् । तपाईलाई पत्यार नलाग्ला ? तर ईरानका उक्त बालकले ६ बर्षको उमेरमा नै सिक्स प्याक बनाएका छन् ।
६ बर्षको उमेरमा नै सिक्स प्याक बनाएका ती बालकको विश्वभर नै चर्चा भइरहने गर्छ । आरत होसैनी नाम गरेका इरानका ती बालकका इन्स्टाग्राममा ४२ लाख भन्दा बढि फलोअर्स छन् । ईरानको बाबोल शहरका निवासी उनी लिभरपुल एकेडमीमा स्पोर्ट्स ट्रेनिग लिइरहेका छन् ।
सन् २०१३ सेटेक्बर ३० मा इग्लैण्डमा जन्मिएका ती बालक ९ महिनाको उमेरमा नै जिमनास्टिक थालेका थिए । उनल दुई बर्षको उमेरसम्म नै अन्तरराष्ट्रिय चर्चा कमाइसकेका थिए । उनले फुटबलमा निकै रुचाी राख्छन् ।
February 5, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 2548
December 29, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 5285
२० बर्षिय अविवाहित युवतीको प्रश्न : विवाह पूर्व पराइ पु’रुषसंग यौ*न सम्पर्क गरेको श्रीमानलाइ थाहा हुन्छ कि हुदैन ?
December 24, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 5565
काठमाडौं। म २० वर्षीया युवती हुँ । मेरो विवाह भएको छैन, तर ब्वाइफ्रेन्ड छ । अहिले उसले मसँग यौ*नसम्पर्क गर्ने प्रस्ताव राख्दै छ । मेरो विवाह उसैसँग भयो भने त ठीकै छ तर अरूसँग भयो